Kedu ụdị igwe anyịnya igwe CycleBar na-eji? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Igwe igwe kwụ otu ebe - otu esi emezu
Igwe igwe kwụ otu ebe - otu esi emezu
Kedu ụdị igwe anyịnya igwe CycleBar na-eji?
Schwinn AC Na-arụ Ọrụ Carbon Blue
Nke a bụigwe kwụ otu ebena ọtụtụ atụ ogho Studiojirina nsonyeCybarbar.Dec. 13 2018
ọnụ ala anyịnya igwe
(egwu eletriki na-atọ ụtọ) - Mgbe ị dị njikere ịmalite ịgba ịnyịnya ígwè, ị nwere ike ịnọ na-eche ụdị igwe kwụ otu ebe ị ga-enweta na ihe kachasị mma maka mkpa gị dị ka Barbike, dị ka James - N'isiokwu a anyị ga-akọwa ọdịiche dị n'etiti gafere abụọ ma na-emekwa ụfọdụ nwere nke mere na ị pụrụ ime ka ihe asian mkpebi nke onye na-azụ. Anyi nwekwaa ịnyịnya ígwè abụọ site n'aka onye ibe anyị Orbea. Ha abụọ bụ ụdị vector mara mma.
Ihe mbụ anyị ga - eme ka ọ pụta ìhè bụ ihe dị iche na ọnọdụ dị n’etiti igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. Anyị ga-eme ụfọdụ pụrụ iche ọgbara ọhụrụ pụrụ iche utịp iji gosi gị ihe dị iche na ọnọdụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, igwe kwụ otu ebe na - etinye gị n ’ọnọdụ kwụ ọtọ.
Nke a nwere ike ịdịkwu mfe maka ndị mbido n'ihi na ọ na-achọ obere mgbanwe, na-enyekwu aka ịnya ịnyịnya na gerpack na obere na ihu, nke a bụ ihe aerodynamic nke pụtara na ị ga-enwe ike ịga ngwa ngwa na otu ego mgbalị. Ọ chọrọ ngbanwe karịa, mana ọ na - enyere aka belata etiti ike gị iji mee ka ị dị mfe. - Aka nri, yabụ anyị ga-eme ya. (egwu kọmputa na-atọ ụtọ) - Ogwe ntụpọ na-enye ọnọdụ atọ dị iche iche.
Ihe mkpuchi, ọkpọkọ, na elu. N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-etinye oge ka ukwuu na hoods, mana tụlee na-eji abanye miri emi karị. Ọ dịkwa mma maka sprints na ụmụ, n'ihi na aka gị nwere nchebe karịa ma ghara ịdị na-apụ apụ.
Ọ bụ ezie na n'elu m na-eji dị ka ụdị aka ọnọdụ na-agbanwe n'ihi na ha nwere ike inwekwu nkasi obi ma zie ezi - Iji chọpụta uru ndị dị na akara aha abụọ ahụ, anyị mepụtara ụfọdụ ọgbara ọhụrụ dị elu na ọkaibe nke nnwale - Anyị mere - Aka nri, nnwale otu. (adụ beats nke electronic music) Ya mere, n'ihi na nke a nnwale anyị ga-tryand enyocha ihe dị iche na aerodynamics na Ya mere spe ed, i nwere ike nọkwasị abụọ dị iche iche handlebar ụdị na otu ego nke mgbalị. Iji mee nke a, anyị na-agbada kilomita abụọ nke okporo ụzọ a yana anyịnya igwe abụọ ọsọ ọsọ ka anyị nwere ike wee hụ nke anyị nwetara oge kachasị ọsọ.
Ya mere - Dị ka ezigbo nnwale, enyi, echere m ka anyị mee ya. - Ka anyị mee ya. (Ha abụọ na-eme mkpọtụ) - Ka anyị pụọ. - Atọ, abụọ, otu.
Gaba! - (grunts) Ee! (egwu egwu egwu) - 2K dị ogologo karịa ka m chere! M nwere ike ugbua na-eche ukwuu wider, ukwuu na aerodynamic! All m chọrọ ime bụ na-miri - Atọ abụọ otu. (Obi ụtọ ụtọ rock) Ee, ọ dị mma, ee. (Ha abụọ chịrị ọchị) Gịnwa kwanụ? - Echere m, mgbalị niile siri ike, ọ bụghị ya? - Ee.- Ma olee otu ị siri chọta ọnọdụ gị? You hụrụ igwe kwụ otu ebe? - Ee, m na-ekwu, o nwere akaji anọ centimita na ya.
Na m nwere ike inwe mma aerodynamic na ebughibu - M gbalịsiri, m
Ahụ m gwara m ka m nwaa ya ala. Drikwọ ụgbọala n’ọsọ adịghị mma na ịkwụwa aka ọtọ. Ka m nwaa igwe kwụ otu ebe ma --- Ee, ka anyị si ahia.- Ka anyị hụ otu anyị ga-esi.- Ka anyị zụọ ahịa.- Gaa! ) - Ozugbo, na-enwe ahụ iru ala karị na nnukwu ọsọ.
Nwere ike banye n'ime ọnọdụ ahụ dị ala, warara, nke ikuku. (Obi ụtọ rock rock) (grunts) - Oh god! Ee, enwere m ihe ọ rụpụtara ebe a na ekwentị m. N'ihi ya, emere m igwe kwụ otu ebe na nkeji abụọ, sekọnd 49, nkezi ọsọ nke kilomita 43 kwa elekere.- Nke ahụ adịghị njọ.- Ogwe nkwụsịtụ gị na-agba ọsọ.- Ah, ị kụrụ m. (ọchị) - You mere ya na 2: 41 na nkezi nke 45 kilomita kwa elekere. - Ọ dị mma, ọlụlụ, ọ dị mma. - Ma na flatbar igwe kwụ otu ebe m mere ya na atọ nkeji, 10.
Ya mere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 sekọnd nwayọ. - Eeh. - Ma nke ahụ bụ nkezi nke kilomita 37 kwa awa.
Did mere ya na 3:04, nke ahụ bụ nkezi nke 39 kilomita kwa awa. Ya mere, ị kụrụ m ọzọ, ihe dị ka sekọnd 6. - Ọ dị mma - Mana nke ahụ bụ n'ihi na m malitere gị - echere m, ee, echere m na nke a malitere --- ee, ọ bụ ya mere, ọ bụ ya mere, mana ọ bụ ya kpatara .- Mana dịka ị pụrụ ịhụ site na nsonaazụ, Ogwe Drop bụ n'ezie nke kachasị ọsọ maka anyị abụọ.
Mana nke ahụ bụ ihe a na-atụ anya ya ka ogwe osisi dobe na-enye onye ọrụ ohere ịdị ala ma dịkwuo elu. Mgbe ahụ dobe mmanya bụ onye mmeri - Oghere dobe bụ onye mmeri. (Mellow gbagwojuru egwu eletriki) Ogwe igwe nkedo dị mma n'ihi na ọnọdụ aka atọ dị iche iche na-eme ka ọ dị oke egwu, yabụ ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya mgbe Ọ bụrụ na ị gaa ogologo njem ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna ịme mgbede egwuregwu mbụ gị, mgbe ahụ ọ bụrụ na nkwojiaka gị , aka ma ọ bụ ogwe aka nwetụrụ ike ị nwere ike ime ka onwe gị dịkwuo ala ma nwee nkasi obi naanị site n'ịgbanwe ọnọdụ aka gị.- Ọ na-atọ ọchị ị na-ekwu na n'ihi na ọ bụ naanị bardos dị larịị na-enye otu aka.
Mana ọ dị ezigbo mma maka mkpụmkpụ, njem ndị ọzọ mepere emepe. Ọ bụ n'ihi na ọ dị mkpụmkpụ, saa mbara, ya mere ka ọ dị mma ma kwụsie ike. Yabụ na ọ dị mma maka ịkpa ákwà na ịpụ apụ.
Yabụ na ọ dị mma maka ịnya ụgbọ nimble, n'ezie. - Ee, ị maara ihe, nri? Echere m na anyị kwesịrị ime nnwale ọzọ iji chọpụta ụzọ njiri mara nke mbadamba ntụpọ ahụ. - Ollie, echere m na nke a bụ ezigbo echiche.
Echere m na anyị kwesịrị ịkpọ ya ihe ịma aka. - Eeh, nnwale agility Ọ dị ka ịgba igwe kwụ otu ebe. (Barking nkịta) - Yikes - nnwale abụọ. (adụ egwu nke egwu elektrọnik) Nnwale abụọ bụ nnwale agility.
Ya mere, mụ na James ga-agafe ọsọ ọsọ a nke cones na nnukwu ọsọ. Nke ọ bụla cone nwere usoro ọgbara ọhụrụ dị elu na ọkaibe na-achọpụta ya. (Chicken Squawks) Anyị hapụrụ ego ọ bụla iji mepụta nnwale a. (mellow beats electronic music) Anyị abụọ ga-agagharị na slalom, gburugburu obere gburugburu, wee laghachi azụ.
Ya mere malite ma mechaa dị ebe a. Anyị ga-asọ mpi na igwe kwụ otu ebe na oge kachasị ọsọ bụ onye mmeri. Ma ị nweta ntaramahụhụ nke ise maka akwa ọ bụla, ma ọ bụ na m pụtara ngwaọrụ nchọpụta kụrụ, nke ị kụrụ. (snorts) Nri. - Ka anyị gaa n’ihu. - Aga m enye gị oge.
̀ dịla njikere ịga? - Ee, adị m njikere. - Ewepụghị aka, James. Atọ
Abụọ - ụjọ na-atụ m. - Otu.
Gaba! - N’aka nri, M tọrọ atọ. Kwesịrị iji ya nwayọ. Obere nwayọ.
Site, m gafere. Gburugburu. Oh ee, kwụsịrị itule! Ka a pụọ. (Grunts and gasps) - Ooh, dị ọcha ọsọ .17 sekọnd - Ya mere ugbu a ọ bụ oge Ollie.
Otu, gawa! (Igwe dị nro nke egwu kọmputa) 14, 15, 16, 17 18.
Oh, gbadaa! Oh, ọ Agbaghara nke ahụ! (Ọchị) Ma kwụsị! oge nke 22 sekọnd. - James ugbu a na ogwe osisi. Nye ọnụ. - Adịla m njikere. - Atọ, abụọ - - Ee! - Otu. - Ee! - Gaa! Ma gawa! - Na na na na na, na ọ bụghị clipped ke.
Oh! (Grunts) Oh, oo, oo! (ọchị) (nwayọọ bekee egwu egwu) Oh, furu efu ole na ole, ya mere ọ ga-adị mfe obere. Chei! - Banye, banye! - Oh, zutekwa ndị a.- Nri, oge nke abụọ ntaramahụhụ.
Yabụ 43 sekọnd - gaa! (Pịa igwe kwụ otu ebe) (ọchị) Ọ dị mma! Oh, oo! (gasps na ịchị ọchị) (nwayọọ gbagwojuru egwu elektrọnik) Site na usoro izizi mbụ. Site na ya, mara mma ma dị ọcha. Ezigbo nguzozi ebe ahụ site na otu siri ike, dịka site na, ọ na - akwụsị n'oge 23 sekọnd - echere m oge ọzọ m ga-agba ọsọ site na akwa.
Aga m aghaa mmanya dị larịị - ee, ị nwere ya. Ihe ịma aka, ime - emela, enyi. (nwayọọ beats electronic music) Ya mere, ugbu a bụ oge maka nnwale atọ.
Anyị ga-eleba anya na nkwụsi ike nke igwe kwụ otu ebe. Ugbu a NASA na-enyocha ịnyịnya ígwè. Ọ bụ eziokwu - Kpọrọ nke ọma - Ya mere, anyị ga-agba ịnyịnya n'elu osisi ahụ na-enweghị adapụ - Nke ahụ bụ osisi nke ọnwụ n'akụkụ aka nri. (Onye na-eti mkpu) (egwu egwu egwu) (na-eti mkpu) (ọchị) (ọchị miri emi) - Ọ lanahụrụ ya dị ọcha, ebe ihe siri ike bụ ịtọlite ​​igwe kwụ otu ebe.-Oh! (Grunts) - Oo! (grunts) Mba! Naanị kwatuo ogwe nke abụọ.
Otu ọzọ nwaa, enyi. Ka anyị gafere. Akpa doo, mere.
Dị ọcha. (Moans) - Lousy Williams na-esote na mbara igwe kwụ ọtọ. (Pịa igwe kwụ otu ebe) - Oh! (Mkpọtụ) - Okpu! Nwoke siri ike.
O siri ike. (chịrị) (mkpọ mpịakọta) - Oh! (Ntị na-ege ntị) - Oh nwoke, nke ahụ bụ - Nke ahụ siri ike. - Ee? - Abụ m ihe nzuzu - Ihe niile egosila m bụ na njikwa igwe kwụ otu ebe m chọrọ ụfọdụ ọrụ. (ọchị) Ya mere ugbu a, anyị gbanwere igwe kwụ otu ebe na anyị ga-aga
Echere m, ị ga-anwale ụlọ mbadamba, m ga-anwale ogwe ntụ - Ee, enwere olile anya na nke ahụ dị mfe karịa ihe m nwere. (ọchị) - Ọfọn, ka anyị hụ ka ị mere. You chọrọ ibu ụzọ - ee e. (egwu egwu egwu) - Ọ dị mma, ọ dị n'elu ogwe mbụ.
Ọ bụ nke abụọ, nke ahụ bụ nke siri ike. Ọ na-edozi igwe kwụ otu ebe ma gbalịa ibili maka osisi nke abụọ. (Ollie na-asụ ude) (James na-eze ume nke ukwuu) Mgbalị nke abụọ, n'elu ogwe mbụ mara mma ma dịkwa mfe, n'akụkụ siri ike. Oge gara aga, n’elu ogwe mbụ, gbatịa igwe kwụ otu ebe.
Ọ na-aga ngwa ngwa! Oh, dị nso! Yabụ, ugbu a ọ bụ oge nke m ịnwale dropbar. - Eeh. - Obi dị m ụtọ na ọ bụghị n'ezie na ya.- Ọ dị mma.- Ka anyị hụ ka ọ si aga. (egwu egwu egwu) (ndị na-ege ntị na-ekwu okwu ma na-ekele) - ọ bụ ụlọ mmanya mbụ. (ndị na-ege ntị na-eto ma na-eti mkpu) (Ollie na-eti mkpu) - olee otu ọ dị gị? - Echere m na ọ bụ ezigbo ihe doro anya na anyị abụọ, karịsịa m, nwere ike ịrụ ọrụ ntakịrị na nkà anyị na-ejizi igwe kwụ otu ebe.
Mana mana enweghị m ike mezue ihe ntụchi ahụ nke ọma. O doro anya na ọ ga-adịkwu na nkwụsị. Anaghị m ekwu na ọ bụ, achọpụtara m na ọ dị mfe karị. - Ma m na-ekwu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị larịị na nke atọ na-agba ọsọ, na na
O siiri m ezigbo ike. Ya mere - Enwere m ike ijide m na pedals.- Ee, maa - (ọchị) Ọ bụrụ na ị nweta igwe kwụ otu ebe maka okporo ụzọ, nke a bụ n'ezie igwe kwụ otu ebe maka gị.- Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ igwe kwụ otu ebe maka Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgafe ihe ntụchi, ị ga-enwe nhọrọ n’etiti igwe kwụ otu ebe a na igwe kwụ otu ebe a ma ọ bụ naanị nhọrọ ndị a bụ na nke a ka mma. (mellow gbagwojuru egwu elektrọnik) N'ebe ahụ ị nwere ya.
Nnwale anyị zuru ezu - ee, mana ọ kwesịrị ka iburu nke a n'uche, ọ bụrụ na ị si n'ugwu igwe kwụ otu ebe pụta, mgbe ahụ ụlọ ntụ ahụ nwere ike iyi ka amara karịa. Not cheghị? - Eeh, ee, ụfọdụ ndị nwere ike ịtụ ụjọ site n’ile igwe kwụ otu ebe, mana anyị ga - asị kpamkpam ekwela ka ụdị ahụ menye gị ụjọ. Y’oburu n’icho inweta otu, nweta otu.
Ihe ozo anyi kwesiri ikwusi ike bu na odighi azịza di nma ma obu nke ojoo. Anyị anaghị ekwu na otu ka nke ọzọ mma. Ha abụọ dị mma.
Ha dị iche na ha nwere uru na ọghọm dị iche iche. - Ma ọ bụ ya. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, biko nye anyị mkpịsị aka aka.
Ọ bụrụkwa na o nwere ndị enyi ọhụrụ ị na-amụ ịgba ịnyịnya ígwè, gịnị ma ị kọọrọ ha ya? - Ee, ma ọ bụrụ na ị na-achọ isiokwu ọzọ ị ga-elele pịa ebe a maka isiokwu gbasara otu esi eji pedal mkpịsị aka.
Ego ole bụ ịnyịnya ígwè CycleBar?
Ricnye ọnụahịa- KeduỌtụtụNdiCycleBarỌnụ? Ga-achọ iji ụlọ mpaghara gị chọta ihe ị ga-emeịnye ọnụahịana mpaghara gị, mana nke anyị mebiri ya dị ka: Otu klaasị (akpọrọ 'dobe-in') - $ 22. 10 mkpọ nke klas - $ 180.Mar 13 2019
Ogwe okirikiri na-enye akpụkpọ ụkwụ?
MeeAchọrọ m ime ụlọ nke mAkpụkpọ ụkwụ? Obi dị anyị ụtọnye gina a ekele ụzọ nkeAkpụkpọ ụkwụmaka klaasị ọ bụla.
Are nọ ebe a n'ụbọchị dị mma. Otherbọchị ọzọ onye nrụpụta m gosiri m otu akụkọ ịtụnanya na Instagram nke otu n'ime arụmọrụ kachasị mma m hụtụrụla. Enwere m ike ịkọwa ya, mana m ga - ahọrọ na ị ga - ahụ n'onwe gị.
Site na Stuttgart, Germany, biko kelee gị Viola Brand. (Abụ) nwetara 180 zuru ezu, na-eche echiche banyere onye m bụ. Obi ọ gbanweela m? Eleghi anya, mana lee ebe m mechara.
Adị m mma. Ya mere ga n'ihu, ọ na-atụ ụjọ. Anọghị m ebe ị hapụrụ m ma ọlị.
oakley ubi jaket nyochaa
Y’oburu na ichoghi ihu m ka m soro mmadu gbaa egwu, ma o buru na ichoro na onwere ihe nwere ike igbochi m, egosila. Abula n’enye nsogbu gi ugbu a. Pụọ.
Know maara otú. Enyela onwe gị nsogbu ugbu a. You bughi onye ahu bu onye nwara iji okwu oma mee m ihe ojoo? 'Ọ bụ ezie na o were gị oge ụfọdụ iji lanarị, m ka mma n'akụkụ nke ọzọ.
Adim na mma So go, o na-atu ujo. Anọghị m ebe ị hapụrụ m ma ọlị. Y’oburu na ichoghi ihu m ka mu na mmadu gbaa egwu O buru na ichoro ikwenye na inwere ike igbochi m, egosila.
kannondale anyịnya igwe maka ọrịre
Abula n’enye nsogbu gi ugbu a. Pụọ. Know maara otu esi esi ezukọ.
Ọ bụ Viola, nri? Eeh. M na-ekwu na Germany, ana m asị Viola. Ee, mana ị nwekwara ike ịsị Viola.
Achọghị m ịma. Ọ DỊ MMA. Achọrọ m ịsị ya otu ị chọrọ isi kwuo ya .OK yabụ nke a bụ egwuregwu m amaghị.
Ahụla m ya. Ma ọ bụ egwuregwu. Afọ ole ka ị nọrọla n’egwuregwu a? Anọ m egwuregwu a kemgbe afọ iri na itoolu ugbu a.
Oge ọkọchị ọ dị afọ iri abụọ m na-eme egwuregwu ahụ. Ee, ọ dịka ndụ m niile ka m na-eme egwuregwu. You hụrụ ya mgbe ị bụ afọ ahụ? Seenhụla nke a tupu Ọ bụ naanị ị mere ya n'onwe gị? Mba, e nwere m ụmụnne nwoke atọ tọrọ m.
Otu n’ime ụmụnne m mere nke mbụ n’ihi na e nwere mkpakọrịta n’obodo anyị. Ọ bụ otú ahụ ka m ga-esi mara egwuregwu ahụ. Ma ee, achọrọ m ime ihe nwanne m nwoke mere.
Chọpụta. Amalitere m, mgbe m dị afọ isii, ee. Ma ọ bụ - ọ dị ka o siri ike.
Make na-eme ka ọ dị mfe. Echeghị m na m merụrụ gị ahụ - ị nwere ike ịnwale ma ị chọọ. Aga m anwale ya.
Aga m anwale obere oge. You mejọrọ onwe gị Ee, m merụrụ onwe m ahụ otu oge. Etisiri m ụkwụ m na - agbalị - Anọ m na aka.
Na m gbalịrị - ee, Anọ m na sadulu na m gbalịrị elu na njikwa ahụ. Nri. Nke ahụ dị oke egwu, ee ee, mgbe ahụ agbajiri m ụkwụ m.
Nri. Ee, mana nke ahụ bụ naanị nnukwu mmerụ ahụ n'ime afọ 19. Na m kechioma.
Ee, ị bụ. Yabụ na nke ahụ na-atọ ụtọ. A gwara m na ikiri ihe ngosi m na Germany nyeere gị aka ịmụ Bekee.
Ee, n'ezie m mụtara Bekee n'ụlọ akwụkwọ. Ma mgbe ahụ, achọpụtara m banyere ihe ngosi gị ebe a. Anọ m na-ele ha anya ruo afọ abụọ ugbu a, amaghị m. n'ihi na enwere m ike ịghọta ihe niile ị na-ekwu Nke ahụ dị m mma.
Otutu mmadu enweghi ike. Ee ee, ana m ekiri ihe nkiri a. Mu nokwa kwa pọdkastị.
Ya mere, ee. Oh daalụ, daalụ. Ọ dị mma, mgbe nke ahụ gasịrị, ya na Viola.
Anyị na-azụ na nkà cyclist Viola Bra na yabụ na ị nọrọ n'ọtụtụ asọmpi. Imeri nke ọ bụla? Ego ole ka ị nwetara, kedu mmeri i nwetara? M merie ugboro atọ nrite ọla ọcha na World Championship. Anọ m na-achị ọla ọcha ọla ọcha nke asọmpi mba ụwa.
E burukwa m onye mmeri Europe na-achi. Yabụ m meriri n'asọmpi European ugboro abụọ, chaị, ọ dị mma, ị maghịkwa nke ahụ, mana ị batara n'afọ mbụ Ellen DeGeneres Artistic CycleCompetition sonyere .Yes.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na ị nọ ebe a taa makana m bidoro asọmpi taa. Naanị m bụ naanị onye ọka ikpe, ị meriri. Eeh.
Daalụ, Ellen. Ọ dị mma, ndị enyi anyị nọ na Shutterfly hụkwara ndị German Artistic cyclist n'anya. Ha ga-enye gị ego maka $ 10,000.
Ụzọ adịghị! Ee, ee, ụzọ! Chi m, chi m, chi m! Achọrọ m Mark Wahlberg ekele, hụ gị echi, dịrị ibe gị mma. Ka ọ dị.
Kedu ihe dị iche na SoulCycle na CycleBar?
N'ozuzu,Cybarbarawade a ọzọ asọmpi ikuku, na ndụ isi na a leaderboard na ndị ọzọ ufiop klas.Mkpụrụ obika mma maka ihe siri ike ma introspective mgbatị; na klas nke ọkụ oriọna na enweghị akara iji kwuo maka ya.Cybarbardịkwa oke ọnụ, nke bụ ihe dị mkpa!16.08.2019
Ego ole ka ndị nwe CycleBar na-eme?
Studlọ ọrụ ndị a ahụwo uto na-esote ọnwa 17 gara aga, yana mmụba pasent 19 na ego ha nwetara. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị na-enweta ego US $ 620,000 kwa afọ.06.25.2019
Kedu akpụkpọ ụkwụ maka CycleBar?
Ha dị ka egwuregwuakpụkpọ ụkwụ, ọ na-adị ha ka ịgba ọsọakpụkpọ ụkwụ, ha na-ejekwa ije dị ka egwuregwuakpụkpọ ụkwụ. SPD dị na ala dị ala, nke na-eme ka ịgagharị na studio ahụ breeze. Tụkwasị na nke a, ị na-eji otu velcro eriri mee ha nke ọma, kama ịbụ ihe siri ike iji dochie obere vidiyo. Nọvemba
Ndi CycleBar kariri SoulCycle?
N'ozuzu,Cybarbarawade a ọzọ asọmpi ikuku, na ndụ isi na a leaderboard na ndị ọzọ ufiop klas.Mkpụrụ obibummamaka mmega ahụ siri ike ma ọ bụ introspective; na klas nke ọkụ oriọna na enweghị akara iji kwuo maka ya.Cybarbardịkwa oke ọnụ, nke bụ ihe dị mkpa!Ọgọst 16 2019
M ga-efufu ibu na-agbagharị ugboro atọ n’izu?
1. Ọ bụ Mmetụta Ahụmịiko Cardio Na - adọrọ Mmasị - Ma Inwere Ike Ghara Burnre Dị Ka Ichere.Na-atụgharịmaara ogologo oge iji belata abụba ma nyere ndị mmadụ aka ịkwụsị pound. 'Nwuoatọugboro n'izuma ị na-ere ọkụ ruo calorie 1,800, mana paụnd abụba yiri kalori 3,500.Sep 1 2017
Ego ole ka ọ na-eri iji malite CycleBar?
Naeri iji malite CycleBarFranchise ga-agụnye ndị na-esonụ: Total Investment: Mkpokọta ulo oru mbo dị mkpa iji malite ọrụ nke a “CycleBarFranchise ”aha sitere na $ 319,150 - $ 497,200. Ego mbụ: feegwọ ịkwụ ụgwọ izizi: $ 60,000.08.01.2020
Linggba ụkwụ ụkwụ ụkwụ ọ dị njọ?
Ihe mere na ụfọdụ ndị na-ahọrọ na-agba ịnyịnya na-enweghị ihe ọ bụla na haụkwụha niile na-agbagharị gburugburu na-ejigide mmegharị ụkwụ ụkwụ nkịtị. Mgbe nke a na-enyere aka n'ọtụtụ ebe, ọ na-emekwa iheụkwụ ịgba ígwèike gwụrụ na-akọwa dị ka mmegharị ahụ na-adịghị arụ ọrụ nke nwekwara ike imetụta ahụ gị dị ala.
You chọrọ akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche iji gbaa ịnyịnya ígwè anyị na-anọ ọdụ?
Otu ugborogịnwee mmega ahụigwe kwụ otu ebe, e nwere bụ n'ezie naanị otu ọzọ mpempe gia nke dị oké mkpa ka ihe dị irè mgbatị: A ụzọAkpụkpọ ụkwụ. Ma mgbe niilesneakersbụ nhọrọ zuru oke, clip-inAkpụkpọ ụkwụnwere ike ime mgbatị gị na ọkwa ọzọ.Ọkt 23 2020
Ọ dị mfe ịdebanye aha maka CycleBar?
Banye na ịwụli n'elu igwe kwụ otu ebe bụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe. Nke kachasị mma, onye ọ bụla nwere ike ime ya! N'agbanyeghị ebe ị nọ na njem ahụike gị, enwere igwe kwụ otu ebe maka gị na CycleBar. Chọghị ịgbago na tank efu, n'ihi ya, anyị na-akwado ka ị jiri mmiri buru ibu na nri dị mfe.
ofe dị mma
Kedu otu esi ahọrọ igwe kwụ otu ebe maka klaasị CycleBar?
Mgbe ị na-ede akwụkwọ na klas, ị ga-ahọrọ igwe kwụ otu ebe. Naanị jụọ enyi gị igwe kwụ otu ebe ha họpụtara ka ị nwee ike ịnọkwasị n'akụkụ ha. Kedu ihe ọzọ m kwesịrị iweta na gịnị ka m ga-eyi? Na CycleBar, anyị na-elekọta ihe niile, yabụ ihe niile ị ga - eme bụ igosi elu, gbakwunye na ịgba ịnyịnya.
Kedu ụdị uwe ị na-eyi na CycleBar?
Anyị na-enye mmiri a nụchara anụcha, nri nri, mkpọchi ndị nwere keypads echekwara maka nnweta dị mfe na nchekwa dị mma maka ihe niile ị nwere, agbatị ntutu gị, akpa akwa mmiri, na ụlọ mposi ndị ọzọ maka iji. Anyị na-atụ aro tank ma ọ bụ t-shirt na ụdị dabara adaba, obere egwuregwu ma ọ bụ ogologo ọkpa.